Toa tsy mampiraika ny Malagasy mihitsy izany ary tsy misy ihany koa ny fitsipika mazava amin` ny fanajàna ny elanelana. Mifanosona hatrany ny mpilahatra nanomboka tamin` ny Tsena mora sy Vatsy Tsinjo ka mbola mitohy izao amin`ny Tosika fameno. Na amin` ny fandoavana faktiora na filaharana vola any amin` ny banky aza dia tsy misy ny fanajàna io elanelana io. Rehefa miditra anaty birao ihany vao mandray fepetra ny tompon'andraikitra amin`ny fampiharana izany.Ny eny an-tsena sy eny an-dalambe izany moa dia tsy misy resaka 1 metatra mihitsy. Ny arotava ihany ho an` isika Malagasy no fiarovana amin`ny aretina Coronavirus. Resaka fotsiny sisa kanefa dia fepetra tsy maintsy arahin` ireo firenena voakasiky ny coronavirus ny fanajàna elanelana iray metatra.